10 Cabbitaannada Khamriga si aad isugu daydo Adduunka oo dhan | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Cabbitaannada Khamriga si aad isugu daydo Adduunka oo dhan
Cuntooyinka qarsoodiga ah, dhadhankii maan-dooriya, oo aad u khamri badan, dunida baararka ugu fiican iyo naadiyadu waxay u adeegaan kuwan 10 waa in la tijaabiyaa cabbitaannada aalkolada. Laga soo bilaabo Shiinaha ilaa Yurub, qaar ka mid ah 10 cabbitaannada khamriga si loogu tijaabiyo adduunka oo dhan waa dhowr boqol oo sano. Si kastaba ha ahaatee, aad bay caan u yihiin, iyo qabsashada cabitaan ama 2, fasaxaaga waa waayo -aragnimo aan la seegin.
1. Cabbitaannada Khamriga si aad isugu daydo Adduunka oo dhan: Aperol Spritz Talyaaniga
Is biirsaday oo ku salaysan khamri, Aperol Spritz waa mid macaan oo maaddooyinka ay ka kooban tahay waxay ka dhigi doonaan kuwo xaddidan oo talooyin ah kahor intaan koorsooyinka waaweyn imaan. Spritz waa aperitif caan ah oo caan ah ee Waqooyiga Talyaaniga, markii ugu horeysay wuxuu ka yimid Venice. Spritz waa isku darka Campari, prosecco, iyo biyaha soodhaha, baraf, sidaas darteed waa ku habboon tahay in la cusboonaysiiyo fasaxaaga fasaxa magaalada.
Waxaad u badan tahay inaad ku arki doontid cabbitaanka midab-casaan-casaan ah galaasyada khamriga ee sarreeya, miiska makhaayad kasta oo ku yaal Talyaaniga. Aperol spritz waa nasasho iyo ku habboon maalmaha xagaaga kulul ee Mediterranean, markaa waa inaad si fudud u tijaabisaa cabbitaankan aalkolada ah markaad wax ka cunayso Talyaaniga.
Ka dib markii la mamnuucay 100 sano ee France, Fairy Green -ka ayaa dib u soo caan baxaya. Cabitaankan khamriga ah ee cagaaran wuxuu ahaa mid ay jecel yihiin qorayaasha Paris iyo fannaaniinta 19-20th qarnigii, inta badan Montmartre. Absinthe waa mid ka mid ah 10 cabitaannada khamriga ee ugu xooggan si loogu tijaabiyo adduunka oo dhan.
maanta, waxaad qaadan kartaa tallaal absinthe ah, laakiin duris kaliya maadaama cabitaankani aad u xoog badan yahay, baararka badan ee Paris. La Fee Verte, Lulu Caddaan, L’Absinthe Cafe, waa qaar ka mid ah meelaha ugu fiican ee aad ku tijaabin karto cabbitaanka khamriga ee ugu xooggan adduunka. Si kastaba ha ahaatee, maaddooyinka aasaasiga ah ee aad dhadhamin doonto nooc kasta oo absinthe ah waa anise, ubaxa dacar, iyo fennel macaan.
Waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn in "Sangria" ay ka timid erayga "Sangre", dhiig, af Isbaanish. Ma jiraan wax laga walwalo oo ku saabsan maaddooyinka cabitaanka khamriga ah, magacan gaarka ah kaliya wuxuu tilmaamayaa midabka cas ee xooggan. Ma jiraan wax ka fiican koob Sangria galabtii oo wata saxan Paella.
Roomaanku waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee Sangria ka abuura canab qarniyadii dhexe. Cabbitaanka canabku wuxuu noqday cabbitaan khamri caan ah ka dib xoogaa khamri ah si bakteeriyada looga fogeeyo. Sangria dhaqameedka waxaa laga sameeyay canab Tempranillo, ku koray gobolka Rioja, Spain. Si kastaba ha ahaatee, waxaad isku dayi kartaa cabitaankan aalkolada leh ee macaan meel kasta oo Spain iyo Portugal ah.
Dhowr meelood oo lagu taliyay oo leh Sangria ugu fiican Barcelona: cava iyo cas Sangria ee Arcano, qaraha leh Sangria ee Tigidhada.
Jinku wuxuu markii ugu horraysay yimid Ingiriiska isagoo ka yimid Holland qarnigii 18aad. Sababta ayaa ah Gin waxaa laga sameeyaa miraha duurjoogta ah, sidaas darteed Gin waa cabitaan ku salaysan berry oo lagu qaso soodhaha, biyaha, marmarna macmacaan. Ginku wuxuu ahaa cabbitaankii ugu horreeyey ee dumarka iyo ragga isugu keenay baararka ku yaal England oo dhan. Sababtuna waa khamriga oo aad u sarreeya, samaynta dhammaan xannibaadaha ayaa baaba'aya.
maanta, Gin waxaa lagu qaso maaddooyin kala duwan: reexaanta, xaleef liin la dubay, peppercorns, iyo casaan-casaan casiir leh. Maadaama Gin aad u khamri yahay, waxaad u sakhraami doontaa si ka dhakhso badan xawaaraha iftiinka. Sayidka, waxaa had iyo jeer lagu talinayaa inaad tagto baararka koox ahaan. Habkan waad ka badbaaday mid khiyaanada weyn ee safarka si looga fogaado adduunka oo dhan, sida deegaanka saaxiibtinimo oo isqarinaya.
5. Becherovka Jamhuuriyadda Czech
Aalkolada caanka ah ee Jamhuuriyadda Czech waa biir. Beerku wuu ka jaban yahay biyaha Czechia, dad badanina ma oga in cabitaanka khamriga ee ay tahay in la tijaabiyo uu yahay Becherovska. Waa sax, cabitaanka Becherovska ee aadka u khamriga ah ayaa ugu caansan jiilaalka. Cabitaankani wuxuu ka kooban yahay in ka badan 20 noocyada geedaha, Qorfe ayaa dhadhantay, lagu qasi jiray casiir pear ama cananaas. Tani waxay sabab u tahay dhadhanka daawada ee xoogga leh, iyo dabcan the 38% khamriga.
Meesha ugu fiican ee lagu tijaabiyo Becherovska waa Becher's Bar. Barkan qabow waxaa loogu magac daray Josef Vitus Becher, oo khamriga ka beddelay daawo dheefshiidka, galay khamriga qadhaadh ee ay maanta tahay, ku soo noqo 1807.
6. Koobka Pimm ee Boqortooyada Ingiriiska
Ka -qaybgalka Wimbledon ama Bandhigga ubax -sannadeedka Chelsea ee fasaxaaga Ingiriiska? Waxaad u badan tahay inaad cabto wax ka badan 1 koobka Pimm. Pimms waa cabitaanka xagaaga ugu dambeeya ee dhacdooyinka xagaaga ee England, macaan, baraf, oo miro lagu adeego, ku habboon maalmaha xagaaga kulul.
Si kastaba ha ahaatee, ha ku khaldin cabitaankan miro -dhalku inuu noqdo feer wanaagsan, maxaa yeelay waxaa ku jira runtii 25% khamriga. Intaa waxaa dheer, Pimms-ku waa gin-ku-saleysan kaas oo ku daraya heerarka khamriga, markaa waxaa laga yaabaa inaadan xitaa ogaan karin sida 1-2 cabitaanku wuxuu kaa helaa wax ka badan talooyin dhacdooyinka xagaaga ee ugu weyn Ingiriiska.
7. Khamriga wuxuu Cabbaa Inuu Isku Dayo Adduunka Oo dhan Jiilaalka: Gluhwein
Waqtiga kirismaska ​​waa mid ka mid ah waqtiyada ugu wanaagsan ee lagu safro Yurub, iyo suuqyada Christmas waa soo jiidashada ugu yaabka badan. Gluhwein waa khamri mulled la yaab leh, waxaadna ka dhadhansan kartaa suuqyada kirismaska ​​ee Jarmalka, Austria, iyo Switzerland, kaliya raac dadka faraxsan.
Si ka duwan khamriga cas, Gluhwein waa ka macaan, lagu daray liin dhanaanta, uunsi, iyo qorfe. Intaa waxaa dheer, waxaad ku iibsan doontaa diiran, sidaa darteed waxay ku siin doontaa nasasho macaan oo raaxo leh oo aad ka soo wareegto xilliga jiilaalka qabow ee Yurub. Si ka duwan cabitaannada cimilada qabow, Schnaps waa beddel fiican oo cabbitaannada aalkolada leh ee dhadhanka leh si aad isugu daydo markaad Yurub joogto.
8. Cabbitaanka Khamriga Si Loogu Tijaabiyo Dalka Shiinaha: Khamriga Maotai
Khamriga Maotai ee Shiine ee qaranka waxaa laga soo saaraa gobolka Guizhou. Maotai waxaa markii ugu horreysay la soo saaray xilligii boqortooyadii Ming qarnigii 16aad. Tani waa in la tijaabiyaa cabbitaanka khamriga ah ee Shiinaha waa mid hadhuudh lagu sameeyay geeddi-socod qaadanaya dhawr sano ilaa isku-darka si khamrigu si fiican u neefsan karo.
Sidaas, haddii aad tahay socdaalka Shiinaha, markaa hubaal isku day cabitaankan Maotami ee gaarka ah. Waxaa ugu wanaagsan in la dhadhamiyo 20-25 heerkulka darajooyinka, galaas qaas ah oo tulip ah. Tani waxay kuu oggolaan doontaa inaad dhadhamiso udgoonnada hodanka ah iyo kuwa xoogga leh ee cabitaankan shiinaha ah ee maraqa soy-dhadhan leh.
9. Grappa Talyaaniga
Waxaad dhadhamin kartaa dhadhankan macaan – canabka canabka ayaa caan ka ah Waqooyiga Talyaaniga, Switzerland, iyo San Marino. Intaad cabayso Aperol qadada, grappa waa cabitaan casho kadib, si loo caawiyo dheefshiidka baastada culus ama cuntooyinka pizza. Sidaa darteed, si ka duwan khamriga caadiga ah waxaad ku cabbi doontaa muraayadaha khamriga sare, grappa wuxuu ku imaan doonaa muraayado yaryar oo 1-2 wiqiyadood.
Intaa waxaa dheer, waxaad isku dayi kartaa Grappa si wada jir ah espresso gaaban, ama xitaa dhadhamin in lagu dhex daray cocktails, labada jid, waxaad ku raaxaysan doontaa tijaabinta cabbitaanka khamriga Talyaaniga ee caanka ah, waana inuu ku dhejiyaa cuntadaada iyo cabitaannada aad ku qasban tahay inaad ka tijaabiso Talyaaniga.
Khamriga ugu da'da weyn Yurub, Jenever waa asalka Gin. Si kastaba ha ahaatee, maanta labadan cabitaan waa laba cabitaan oo aalkolo ah oo aad u kala duwan. Markaad joogtid Belgium waxaad isku dayi kartaa Genever -ka weyn iyo kan yar, dhalinta Gen sida aperitif, halka odaygii Gen-ka ahaa casho ka dib sida dheefshiidka.
Jenever waa ruuxa Belgium in ka badan 500 sano. Dad badan ayaa u safraya Belgium iyagoo ujeedadoodu tahay inay dhadhamiyaan biirka Beljamka ugu fiican. Si kastaba ha ahaatee, Jenever waa cabbitaanka khamriga ee Belgium. Haddii aad rabto inaad ka dhigto xusuusta Belgium Jenever, raadi dhalada dhoobada laga sameeyay, jaakadaha gacanta lagu farsameeyay ee kaydiya khamrigaan cajiibka ah.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inaan kaa caawino qorsheynta fasaxaaga adduunka oo dhan. Baararka ugu fiican, pubs, iyo dhibco si loo tijaabiyo kuwan 10 cabitaanka khamriga ee adduunka oo dhan waa safar tareen.
Miyaad rabtaa inaad ku dhejiso dhejiskayaga baloogga “10 Cabitaan oo Khamriga ah si aad isugu daydo Adduunka oo dhan” goobtaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Falcohol-drinks-worldwide%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#cabitaanka Alcohol AlcoholDrinks AlcoholDrinksWorldwide PopularAlcoholDrinks